Eyona Plugin ilungileyo yokuGcina iWindowsPress
NgeCawa, ngoSeptemba 18, 2011 NgoLwesithathu, Novemba 9, 2011 Douglas Karr
QAPHELA: Oko ndisebenzisa iMyRepono, nditshintshele kwi VaultPress. Kubiza kakhulu kodwa kuyinzalelwane ye-WordPress (ebhalwe ngu-Automattic) kwaye ayinayo yonke imiba yephakeji emnandi eyenziwa yi-MyRepono.
Khange ndibenayo iplagi yogcino lweWordPress ixesha elide. Ke… okokuqala ukuba mna ndilahlekile kwindawo yam egciniweyo yeWordPress yayiyiphupha elibi! Ibiyimpazamo yam… bendisenza uhlaziyo kwindawo yogcino lwedatha kwaye ndalahla yonke idatha ngengozi. Bendizibuza ukuba ndizokubuyisa njani emhlabeni iiposti zam zebhlog kuba bendingenaso isipele. Bendigula esiswini imini yonke.
Ngelo xesha, bendikunye iindwendwe ngubani, ngombulelo, une ukubuyisela imeko engxamisekileyo inqaku lesiza. Kwakukubuyiselwa okubizayo, kubiza kumakhulu eedola, kodwa bendinombulelo ngonaphakade ukuba ndikwazile ukufumana konke kodwa iposti yokugqibela yebhlog ibuyiselwe ngaphakathi kweeyure ezingama-24. Kwiminyaka kamva kwaye sipapashe ngaphezulu kwebhlog ye-2,775. Idatha eninzi (470Mb). Idatha kakhulu ukufaka nje i-cheapo backup kwaye ulindele ukuba isebenze usuku ngalunye ngaphandle kwemicimbi. Ke, ndiye ndakhangela ndakhangela i Eyona ndlela ilungileyo yokugcina i-WordPress - kwaye wayifumana.
Ndiyabazi abantu abambalwa abafake i-backups ngqo kwi-web server yabo ... oku akuncedi xa umphathi wakho elahlekelwa yindawo yakho! Ukuxhasa ngesandla iWindowsPress kukwayintlungu kuba kufuneka ukhuphele iifayile kunye nesiseko sedatha. Abanye abahlobo bam baxhase iifayile kodwa abakuhoyanga ukwenza isiseko sedatha… kulapho konke umxholo wakho ukhona! Ufuna ifayile ye- I-plugin ye-WordPress yokugcina ezibandakanya zonke ezi zinto-nangaphezulu.
Sifake kwaye savavanya myRepono, inkonzo yokulondolozwa kwelifu. I-myRepono yinkonzo elula kakhulu, ekuhlawulisa nge-bandwidth oyisebenzisayo kunelayisensi yesoftware okanye intlawulo enkulu yenyanga. Yipeni ngenyanga kwiisayithi ezincinci kwaye iphantsi kweesenti ezili-10 kwindawo yogcino lwendawo yam.
Iimpawu zeMyRepono zibandakanya:
Ukugcina ukufakwa okungenamkhawulo kweWindowsPress
Ukugcinwa kwazo zonke iifayile zeWindowsPress
Ugcino lwedatha epheleleyo ye-MySQL
Ukhuseleko lweFayile ekhuselekileyo
Izixhobo zokubuyisela iifayile
Ugcino lweFayile yokuGcina
Ulawulo olusekwe kwiWebhu- lufikeleleka nakweyiphi na ibrawuza, naphina
Itekhnoloji yokuthengisa abafundi bebhlogi banako bhalisela myRepono namhlanje ngekhonkco lokudibana kwaye uya kufumana ikhredithi yakho yokuqala ye- $ 5 yee-backups. Yinto enkulu leyo! Iplagi ithathe ngaphantsi komzuzu ukuyifaka kunye nokumisela.
Inqaku elinye-le nkqubo intle yokufuduka kwindawo yakho ye-WordPress okanye ibhlog yakho!
Sep 19, 2011 kwi-7: 06 AM
Kahle kakuhle! Ndicinga ukuba sonke kufuneka sifunde kabuhlungu, akunjalo? Ivakala njengombono omkhulu.
Sep 20, 2011 kwi-8: 07 AM
Ewe kunjalo, ukuba ubuneblogi yeCompendium, ngeyabe ikhuselekile kakade...
Sep 20, 2011 kwi-8: 50 AM
Kuyinyani, ukubeka iliso, ukungafuneki kwesiseko sedatha kunye nokugcinwa kwe-backups ngaphandle kwesiza ziimpawu ezintle zenkonzo iyonke ongayifuni ngokwaneleyo!
Nov 29, 2016 ngo-1:14 AM
Ndisebenzisa i-BackupGuard ukulondoloza indawo yam ye-WordPress.Iyiplagi enkulu! https://wordpress.org/plugins/backup/